UApple unikele ngesigidi esinye seedola eMexico emva kwenyikima | Ndisuka mac
I-Apple inikezele nge-1 yezigidi eMexico emva kwenyikima
Ukulandela isehlo sobundlobongela eMexico embindini wale veki, UApple wehla waya kuqokelela iminikelo kumaxhoba enyikima, ukunceda ukubuyiselwa kwezixeko needolophu ezichaphazelekayo.
UTim Cook ngokwakhe, u-CEO we-Apple, ubhengeze izolo izolo kwinethiwekhi yoluntu iTwitter ukuba lInkampani esekwe eCupertino iceba ukunikela malunga ne-1 yezigidi zeedola ukusebenzisana kwiinzame zelizwe laseMbindi Merika ekuvuseleleni emva kwesi siganeko sibulalayo.
NgoLwesibini ophelileyo, nge-19 kaSeptemba, inyikima eyomeleleyo ene-7.1 inyikime kumbindi weMexico, kubandakanya ikomkhulu kunye nemimandla ejikelezileyo, ebangela isiphithiphithi, ukonakala kunye nelahleko ebonakalayo yempahla kunye neyabantu. Kukho amakhulu abo babulawa yile ntlekele kwaye, ngenxa yesi sizathu, iApple iphumeze umthetho ngokukhawuleza wokunceda amaxhoba enyikima.
"Nangona ubomi bukhona ithemba". Ngaleli binzana, uCook wathetha nabantu baseMexico ukuba abazise ukuba iApple ikunye nabo kwaye inkampani izokunceda kuyo yonke into esemandleni ayo.
Ukusuka kwiVenkile ye-Apple, iMac App Store, iTunes kunye newebhusayithi ka-Apple, sinokwenza umnikelo ukunceda amaxhoba omsitho. Ukongeza, i-Apple izakuchitha ubuncinci i-1 yezigidi zeedola kwimali yayo ukunceda le nto.
Njengoko kwenziwe ngeNkanyamba uHarvey, eyonakalise i-American East Coast kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo, U-Apple ulindele ukuphakamisa inani elifana nalo msitho, malunga ne- $ 8 yezigidi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple inikezele nge-1 yezigidi eMexico emva kwenyikima
URaul Jimenez sitsho
I-Apple sisigidi esinye? Ayizukuba ngu-100 ?? Ngenxa yokuba isigidi esivela kuApple sibonakala sihlekisa kum.
Phendula kuRaul Jimenez
UEduardo Mora sitsho
Leliphi ilizwe kuMbindi Merika olithetha ngalo? Ke ndibhidekile ukuba leliphi ilizwe kuMbindi Merika iApple eyakunikela ngezigidi zeedola ... Ndiyathemba ukuba eMexico baninzi abantu abafumana iimveliso zabo ezahlukeneyo.
Kuba iMEXICO, kwaye abantu baseMexico bangabaseMntla Melika kwaye badlula kwixesha elinzima ngenxa yenyikima yomhla kaSeptemba 19 ukuya kuma-32 yeminyaka ngqo yenyikima eyabachaphazela nge-19 kaSeptemba, 85, mhlawumbi kuMbindi Merika eli lizwe laseMexico kunye Abantu baseMexico, kodwa andazi ukuba kwenzeka ntoni kubantu baseMexico
Phendula uEduardo Mora
UDiana Perez sitsho
Ingxaki kukuba bayinika bani, kuba urhulumente uyayigcina
Phendula kuDiana Pérez
I-Apple TV 4k ayixhasi umxholo we4k ovela kuYouTube